Titan Xp bụ eserese ọhụrụ sitere na Nvidia ma kwado Mac | Esi m mac
Titan XP bụ ihe ngosi ọhụrụ nke Nvidia ma kwado Mac
Ikekwe anyị nwere ike ikwu na ichere ahụ baa uru. Ọfọn, mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ anọ, ndị ọrụ Apple Pro nọ na ihu ọma. N’izu a, anyị na-ebipụta ọtụtụ akụkọ gbasara atụmatụ Apple ọzọ maka desktọọpụ. Nke ikpe azu n’ime ha, banyere nkowa nke ọzọ iMac, na uru ndị na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị.
Na ihe a niile, anyị na-ahụ otú ndị na-emepụta ihe maka Mac na-agagharị tab. N'oge a, ọ bụ Nvidia onye GPU. Ọ bụ ọhụrụ graphic nke ụlọ ọrụ ahụ, baptizim na aha nke Titan Xp n'okpuru Pascal ije ọ ga-enwe nkwado Mac.
Anyị nwere ike ịdabere na ya, dịka ọmụmaatụ na Mac Pro na-esote. Atụmatụ ya nwere bụ ihe ndị a:
12GB GDDR5X 11,4Gbps nchekwa
3840 1,6 GHz CUDA cores, na
12 ike ọjọọ TFLOPs.
Ihe eserese a dị na akụkụ dị elu maka arụmọrụ ma yabụ ndị na-ege ntị ga-adị obere ma na-achọsi ike. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo:
N'ikwu okwu banyere ndị ọrụ, anyị na-ewepụtakwa TITAN Xp ọhụrụ mepere emepe maka ndị Mac na ndị ọkwọ ụgbọ ọhụụ ọhụrụ, nke ga-abata n'ọnwa a. Nke a bụ nke izizi, nke a na - enye ndị ọrụ Mac ohere ị nweta nnukwu ikike GPU ndị na - emeri mmeri nke Pascal nyere..
Otu njedebe nke Mac Pro ugbu a bụ ihe isi ike iji melite akụrụngwa. Na mgbakwunye, eserese ndị dị ugbu a na-eke isi ọwụwa maka ụfọdụ ndị ọrụ nwere ụfọdụ mmemme GPU chọrọ. Ihe mgbakwunye ndị a na-enye ume ọhụrụ maka ndị ọrụ kachasị achọ. Ihe bụ ihe ọzọ, Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na enwere ike iji eserese ndị a na Mac Pro tupu 2013, nke ahụ bụ: 3,1; 4,1; na 5,1 nke 2008, 2009, na 2010.
N'ezie, ị ga-achọrịrị ike eserese dị ukwuu, oge a na-eji ụlọ ọhụụ kachasị mma, n'ihi na ọnụahịa bụ euro 1.349.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Titan XP bụ ihe ngosi ọhụrụ nke Nvidia ma kwado Mac
Ndị kasị ewu ewu free ozi ọma ngwa ọdịnala n'ihi Mac
Ha wu LEGO Macintosh Omuma ya na onyoyo kọmputa